XFCE: Linux Mouse Desktop Environment ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အသုံးပြုသူများကိုများများစားစားမကြာခဏစိတ်ဝင်စားသောခေါင်းစဉ်များသို့မဟုတ်နယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခု GNU / Linux များ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားပြသရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်း၏နောက်ဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည် စိတ်ကြိုက်စွမ်းရည် အခြားသူတွေရှေ့မှာ, ကျန်းမာနှင့်ကောင်းသောယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်။
သေချာသည် GNU / Linux Distroတစ် ဦး ချင်းစီ Desktop Environment (DE)တစ် ဦး ချင်းစီ Window Manager (WM) ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည် Xfceစကားမစပ်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြိုက်ဆုံး Desktop Environment (DE) ဖြစ်ကာယခုတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုသည် Distro MX Linux ကို ၁၉.၃.
"XFCE သည် UNIX ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက်ပေါ့ပါးသော desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာမြန်ဆန်စွာနှင့်စနစ်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ XFCE သည်ရိုးရာ UNIX အတွေးအခေါ်ကိုအထူးပြုပုံစံနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီ desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှသင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၄ င်းတို့ကိုသီးခြားစီထုပ်ပိုးပြီးအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်ရေးကိုယ်တာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ရရှိနိုင်သည့် package များမှရွေးချယ်နိုင်သည်". XFCE အသိုင်းအဝိုင်း (www.xfce.org ဖြစ်သည်).
ထိုအသို့ delving စိတ်ဝင်စားသောသူတို့အဘို့ GNU / Linux Distros စိတ်ကြိုက်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသူများကိုသင်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating Systems ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
GNU / Linux Desktop နေ့များ - ဆင်နွှဲရန် Wallpapers ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
Conky Manager - သင်၏စောင့်ကြည့်ရေးဝစ်ဂျက်များကိုလွယ်ကူစွာစီမံပါ
XFCE - ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင် MX Linux ပေါ်တွင် XFCE ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း
1.1 XFCE ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
1.1.3 Window Manager ကိုချိန်ညှိပါ
1.1.4 Desktop ပင်မ panel ကို
1.1.5 Home Button နှင့် Menu
1.1.6 အခြားပြင်ပဒြပ်စင်များ (Conky)
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်စတင်ရန် XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် ကျနော်တို့ကထွက်ထွက်ခွာအများအပြားဒြပ်စင်သို့ခွဲဝေပါလိမ့်မယ် Desktop Background (နောက်ခံပုံများ)ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသုံးစွဲသူရဲ့အရသာနဲ့ 100% ပြီးသားပါ။
စတင်ရန် XFCE စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း, စံပြ DE ကို၏အလုံးစုံရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူစတင်ရန်ဖြစ်သင့်သည်, ထို option ကိုမှတဆင့်စတင်နိုင်ပါသည် "အသွင်အပြင်" del "Configuration manager" XFCE ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သုံးစွဲသူများသည် tab တစ်ခုစီကို scroll လုပ်သင့်သည် (စတိုင်၊ အိုင်ကွန်များ၊ ဖောင့်နှင့်ဆက်တင်များ) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော configurations ကြိုးစားပါ။ မိုင်းကိုအထက်ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ထိုအခါသင် option ကိုသွားနိုင်ပါတယ် "စားပွဲ" del "Configuration manager" XFCE ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သုံးစွဲသူများသည် tab တစ်ခုစီကို scroll လုပ်သင့်သည် (နောက်ခံ၊ မီနူးများနှင့်အိုင်ကွန်များ) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော configurations ကြိုးစားပါ။ မိုင်းကိုအထက်ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Window Manager ကိုချိန်ညှိပါ
ပြီးရင် option ကိုသွားပါ "Window Manager ဆက်တင်များ" del "Configuration manager" XFCE ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သုံးစွဲသူများသည် tab တစ်ခုစီကို scroll လုပ်သင့်သည် (ရွေးချယ်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်Areရိယာများ၊) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော configurations ကြိုးစားပါ။ မိုင်းကိုအထက်ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Desktop ပင်မ panel ကို
ထိုအရပ်မှသင် option ကိုသွားနိုင်ပါတယ် "Panel" del "Configuration manager" XFCE ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သုံးစွဲသူများသည် tab တစ်ခုစီကို scroll လုပ်သင့်သည် (တင်ပြပုံနှင့် Element များ) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော configurations ကြိုးစားပါ။ မိုင်းကိုအထက်ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Home Button နှင့် Menu
ငါ၏အအထူးသဖြင့်ကိစ္စတွင်, သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့ငါကိုသုံးပါ element (ဝစ်ဂျက်) ကိုခေါ် « Wishker Menu » အစားထိုး "ရိုးရာ XFCE မီနူး"။ အထက်မှာပြထားတဲ့ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း configure လုပ်လို့ရတယ်။
Compton: များစွာသောအခြားအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအရ၊ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်များအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အဓိကမီနူးဝင်းအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ပါ ၀ င်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုများကိုရရှိရန်။
Conkys Desktop ပေါ်မှာလှပပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်း။
သေချာတာပေါ့, အများကြီးပိုနေဆဲအမှုကိုပြုနိုင်ပါတယ် XFCE ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါသို့သော်ဤအချက်မှာလူတစ် ဦး သည်အလွယ်တကူသွားနိုင်သည် ပုံမှန် desktop ၏အမြင်အာရုံအသွင်အပြင်, ဥပမာချက်ချင်းအပေါ်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အခြားတစ်ခုနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဥပမာ - ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «¿Cómo personalizar el Entorno de Escritorio XFCE?», ပုံမှန်အားဖြင့်အရာသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးရိုးရှင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြင်အာရုံရှုထောင့်မှအလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » XFCE: Linux Mouse Desktop Environment ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
GitHub သည် youtube-dl ကိုပိတ်ဆို့။ မကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပြashesနာများကိုရှောင်ရှားရန်အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်